Plastic okpu & closures
Child na-eguzogide ọgwụ na okpu
Pharmaceutical Karama Market - Worldwide Industry Analysis, Size Trends, amụma 2016 - 2024
Post oge: Aug-30-2018
The ahịa maka ọgwụ karama na Europe e ji ya ohere multiple mpaghara site ya emeri na ebe ke Iberia. N'ihi ala mbọhọ na ogologo coastline nke mba a, ndinyanade mbịne site Atlantic Ocean na Oké Osimiri Mediterenian, ọ ha ...GỤKWUO »
The dị iche iche nke plastik
Nweta a nghọta miri emi nke dị iche iche nke plastik na nke onye na-eme ka ndị kasị mma containers maka gị ngwaahịa. Anyị na-atụ a na peeji nke ga-enyere gị aka itopusi nkwakọ acronyms, enyocha uru dị iche iche plastik, ma na-ekpebi ihe e ji mara ndị dị mkpa na gị ngwaahịa packagi ...GỤKWUO »
Gịnị bụ a imecha
GỊNỊ BỤ A 'imecha'? A akpa n'olu imecha ekpebi size na ụdị mmechi chọrọ iji nweta a kwesịrị ekwesị akara. A akpa na ya kwekọrọ ekwekọ okpu ga nwere abịa risịrị. N'ihi na anyị na anyị ihe, anyị ga-enyocha abụọ ụdị dị iche iche nke risịrị na otú e si amata onye ọ bụla. The ...GỤKWUO »
Ekwentị: +86 139 2297 1758